Fanontaniana & Valiny: Fantaro i Noor Pamiri, mpikatroka ho an’ny fiteny Wakhi · Global Voices teny Malagasy
Noor no hitantana ny kaonty @AsiaLangsOnline ny 26 Aogositra - 01 Septambra 2020
Voadika ny 25 Aogositra 2020 14:17 GMT
Noor Pamiri, mpikatroka ho an'ny fiteny Wakhi. Sary natolotr'i Noor Pamiri.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Noor Pamiri (@noorpamiri) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Noor Pamiri (NP): Noor Pamiri no anarako. Teraka tao Hunza Valley Pakistàna. Mipetraka amin'izao fotoana ao New York City. Miasa ho amin'ny fampiroboroboana sy fitahirizana ny Wakhi, tenindreniko.
NP: Mampiasa aterineto ireo mpiteny ny Wakhi mba hampiroboroboana ny literatiora sy ny fifampiresahana amin'ny fiteny Wakhi. Marobe ireo vondrona miasa hampifandray ireo mpiteny ny Wakhi. Miha-hita tsikelikely ao amin'ny aterineto ireo votoaty natao ho an'ny haino-vaky-jery, hatramin'ireo soratra (poezia, tantara, haisoratra). Miaraka mitantana ny Wakhi.org aho, ilay tranonkala voalohany amin'ny fiteny Wakhi ranoiray.
Nandritra ny fotoana elabe ny fiteny Wakhi no nijanona ho fiteny tsy voarakitra an-tsoratra. Ankehitriny, misy endri-tsoratra telo efa ampiasaina ho an'ny Wakhi: Cyrillic, Latina ary Arabo. Mizarazara any anaty firenena efatra ireo vondrompiarahamonina mpiteny ny Wakhi (Afghanistana, Shina, Pakistana, Tadjikistana), mampiasa rafitra fanoratra efatra samihafa, ka mahatonga ireo mpiteny Wakhi any amin'ny firenena hafa tsy hahatakatra manontolo ny votoaty novokarin'ny vondrompiarahamonina avy amin'ny firenena iray hafa. Misy ny ezaka natao mba hamokarana endri-tsoratra iraisana. Hatreto aloha, mbola maloka ny hoavin'ny literatiora, sy ny votoaty amin'ny fiteny Wakhi amin'ny ankapobeny.
NP: Hifantohako ireo vahoaka, ny fiteny, ny tantara ary ny kolontsaina sy ny literatiora Wakhi. Horesahako ihany koa ny fampidirana ho anaty tontolo nomerika ireo fomba amam-panao sy tononkalo Wakhi.
NP: Ny UNESCO dia nanondro / nanasokajy ny Wakhi ho teny iray amin'ireo fiteny ” tena tandindonin-doza” eto an-tany. Tsy misy mihoatra ny 100.000 akory ireo mpiteny azy amin'izao fotoana izao. Na io isa kely io aza dia mbola zarazarain'ny pôlitika sy ny jeografia.
Ny fanantenako dia ny hanefa ny anjarako amin'ny fanaovana izay haha-azo antoka hoe hijanona ho teny velona sy miroborobo ny Wakhi.
06 Aogositra 2020Mediam-bahoaka